KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 21-aad. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 21-aad.
Arbaco, Feberaayo, 13, 2019 (HNN)- waxay inoo mareysay qeybtii hore markii gabadhii labaad ay tiri markaan gurigii galay waxaa iitimid gabar aad uqurux badan waxayna iisheegtay in naagtii duqda aheyd uu walalkeeda soo dirsaday aadna ijecelyahay uuna doonayo inuu iguursado.
aniga markey hadalkaas igu tiri oona aan dareemay inaan qasrigaan ku dhex xanibanahay ayaan kudhahay waayahay ee aaway wiilka?
markaas ayaa waxaa albaabka kasoo galay wiil quruxdiisa aad yaabeyso wuuna isalamay kadibna wuxuu igu dhahay aniga ma rabo inaan ku qasbo jaceyl ayaana kuu qabaa waxaana rabaa adoo raali ah inaan ku guursado ee raali maka tahay??
markaas ayaan ku dhahay raali ayaan ka ahay.
kadibna wuxuu idhahay intaan is mehersan waxaan rabaa inaad balan iga qaado hal shey wuxuuna yahay inaadan qofkale iga door bidin ee ma iga ballan qaadeysaa??
waxaan dhahay haa,
kadibna waxaa noosoo galay wadaad iyo afar marqaati isla meeshii ayuuna arooskii ka dhacay.
wiilkii mudo bil ah ayaan isqabnay waxaana ku nooleen nolol aad umacaan aadna ufarxad badan,
maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in aan ka codsaday in suuqa adeeg ka doonto wuuna ii fasaxay,
kadib waxaan isi soo raacnay islaantii duqda aheyd waxayna iigeysay tukaan uu leeyahay wiil dhalinyaro ah kaasoo haayo alaabta ugu fiican ee suuqa taalo.
adeegii aan ubaahneen ayaan dalbaday intii uuu ii adeegayay islaantii duqda aheyd waxay ii amaaneysay wiilka waxaan ku dhahay maxaad iigu amaaneysaa wiilkaan waadba ogtahay inaan xaas ahaye??
aniga halkaan inaan ka adeegto ayan u imid adeegeena ayaan qaadaneynaa waana ka tageynaa.
kadibna markii uu adeegii noo dhameeyay ayaan lacagtii utaagay balse wuu diiday inuu qaato,
waxaan dhahay maxaa dhacay oo aad lacagta uqaadan la,dahay??
wuxuu dhahay wax lacag ah kaama rabo alaabtaan hadiyad ahaan uqaado hadaad halmar ishumiso.
waxaan kudhahay aniga waxaan ahay xaas laqabo mana iga suurtoobeyso inaan sidaas yeelo,
kadib wuxuu dhahay ama alaabtayda ayaan ceshanaa ama saan kudhahay iiyeel ikhtiyaarka adigaa leh.
markaas ayay naagtii duqda aheyd igu tiri alaabtaan oo dhan qaado waana alaab fiican suuqa qashin ayaa ka buuxo halmar oo aad dhunkatana waxba kaama dhibeyso,
sidey iigu qal-qaalineysay inaan dhunkado ayaan markii dambe ka ogolaaday,
markaas ayaan inta xijaabkii iska rogay dhabankeyga aadiyay si uu iidhunkado lkn meeshii aan dhunkasho ka sugaayay qaniinsho ayaan lakulmay waliba mid aad udaran ilaa aan ka suuxay.
cabaar kadib markaan soo naaxay ayaan waxaan arkay anoo tukaankii ku dhex jiro wali kaasoo kor ka xiran dhaawac darana dhabanka iiga yaalo, waxaana ikor joogtay islaantii duqda aheyd.
aniga waxaan dareemay walbahaar iyo murug aad ubadan markas ayay duqdii igu dhahday soo bax aan baxnee meeshaana anigaa kaa daweynayee.
markaan gurigii imaaday ayuu ninkeygii arkay dhaawaca igu yaalay ayaa waxaa dhacday inuu aad uxanaaqay wuuna iweydiiyay dhaawacaan yaa kusoo gaarsiiyay??
waxaan kudhahay maadaama suuqa ciriiri ahaa awr xaabo wado ayaa midkamid ah xaabadiisa daanka iga gashay siddas ayuu dhaawaca iisoo gaaray.
markaas ayuu wuxuu dhahay waxaan udacwoonayaa qaadiga magaalada si uu suuqaan ciriiriga ah ooo maalinkasta shilalka sababayo wax uga qabto.
waxaan kudhahay khaladka anigaa lahaa ee iska daa lkn wuu iga diiday markaan arkay inay ka go,antahay inuu utago qaadiga magaalada ayaan runta usheegay,
markaas ayuu aad uxanaaqay wuxuuna amar kusiiyay qaar kamid ah adoomadiisa inay ixiraan halkii ayana la igu xiray, kadibna wuxuu soo qaatay seef aad udheer asigoo rabay inuu kurka iga gooyo ayaa waxaa soo gashay islaantii cajuusada aheyd waxayna ku dhahday “gabadhaan wax dambi ah ma aysan sameynin intii aysan isheeda kaasoo bixin iska cafi korimadii aan kusoo koriyay darteed”
sidey utuugeysay ayuu markii dambe ka ogolaaday lkn wuxuu kuyiri waan cafinayaa balse ciqaab daran ayay mari doontaa,
markaas ayuu wuxuu amar kusiiyay mid adoomadiisa kamid ahaa inuu igaraaco garaacis daran,
sidii la iigaraacayay ayaan miir daboolmay kadibna inta isoo qaadeen ayaan waxaa la iiga tagay meel cidlo ah.
aniga anoo aad uxanuunsan ayaan magaaladeydii kusoo laabtay kadibna waxaan lakulmay gabadhaan labada eey wadato waxayna iiga sheekeysay qisadeeda waxaana isla kireysanay gurigaan iyadoo gabadhaan sadaxaadna nagu soo biirtay waxkasta oo aan ubaahanana wey noo soo iibisaa ilaa ay markii dambe lakulantay ninkii xamaaliga ahaa kadibna wixii dhacay ayaa dhacay oo inta ka dambeyso waad ogtihiin.
markii uu khaliifkii mu,miniinta haaruun al-rashiid hadalkaas maqlay ayuu aad uyaabay,
markaas ayay shaharzaad ogaatay in lagaaray subaxii waxayna ka aamustay hadalkii ubanaanaa.
KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 21-aad. added by admin on 13/02/2019